YEYINTNGE(CANADA): Saturday, February 28
ဘန်ကီမွန်း၊ အင်အယ်လ်ဒီ၊ ဆန်ရှင်နှင့် မြေခွေးမြီးပြတ်များ
နအဖရဲ့ အစာကို မြင်ပြီး ထောင်ချောက်ကို မမြင်တဲ့အတွက် နအဖအယုံသွင်း အသုံးချတာခံပြီး ယောင်တီးယောင်တနဲ့ ပြည်တွင်းဝင် ဆွေးနွေးပွဲထိုင်ခဲ့လို့ အမြီးပြတ်ခဲ့တဲ့ မြေခွေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ ထင်ပါသလဲ။ အင်အယ်လ်ဒီသည် ဘယ်သောအခါမှ မြေခွေးအမြီးပြတ် လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်လောက်က ဗီအိုအေဦးကျော်ဇံသာနဲ့ ဦးအေးသာအောင်၊ ဒေါက်တာဦးသောင်းထွန်းတို့ ဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုမှာ ကုလအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည်ကို သွားသင့်မသင့် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အဓိက အခြေခံ(Theme)အဖြစ် ဦးကျော်ဇံသာက ဇောင်းပေးသွားတာက တစ်ခုခုရမှ၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုမှ ဘန်ကီမွန်းက သွားမယ်လို့ မသွားခင် တောင်းဆိုနေတာထက် အရင်ရောက်အောင်သွားပြီးမှ တစ်ခုခုရအောင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်အောင် ဆွေးနွေးတာ ပိုမဖြစ်သင့်ဘူးလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကိစ္စတွေမှာ စကားအရ ချက်ကျလက်ကျ၊ သဘာဝကျကျ၊ ယုတ္တိကျကျ ပြောနိုင်ပေမဲ့ တစ်ကယ်အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမှ လက်တွေ့မကျ၊ အံမကျနဲ့ အလုပ်မဖြစ်နိုင်တာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုရင် ဦးကျော်ဇံသာရဲ့ အထက်ပါဆွေးနွေးပွဲဟာ အတိအကျ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမတ ဘရက်အိုဘားမားက ကြိုတင်လိုအပ်ချက် (Preconditon)တွေ မထားဘဲ အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အိုဘားမားက “ကျုပ်က အီရန်သမတနဲ့ လက်ဖက်ရည်ထိုင်သောက်ပြီး အပြင်းပြေ အလ္လာပ သလ္လာပ စကားစမည်ပြောဖို့ သွားမှာမဟုတ်ဘူး”လို့ ပြန်ချေပခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရေးရာကိစ္စတွေမှာ ထူးခြားတဲ့ ၀ိသေသတွေနဲ့အတူ တစ်ခုတည်းသော အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုရဲ့ တာဝန်အရှိဆုံး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဒီလောက်များမြောင်လှတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စအထောင်အသောင်းတွေကို မအားမလပ်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကြားက မြန်မာပြည်ကို အချိန်ပေးပြီး သွားရောက်ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စကို ကိုဇာနည်တို့၊ ကိုဇော်မင်းဦးတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ရောထွေးပြီး တန်းတူထား မစဉ်းစားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဘန်ကီမွန်းလို တာဝန်ကြီးတဲ့၊ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို တကူးတက အချိန်ပေး မြန်မာပြည်လာပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေကို ရလိုရငြား ပြောကြည့်ပါ။ ငါးမရလဲ ရေချိုးပြန်ပါလို့ တိုက်တွန်းသူတွေက တိုက်တွန်းနိုင်ပေမဲ့ သိသာမြင်သာတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းဖို့ အလားအလာမရှိဘဲ၊ ဘန်ကီမွန်းလို အဆင့်ရှိသူက မလာနိုင်ဘူးဆိုတာလောက်ကိုတော့ နားလည်ပေးသင့်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘန်ကီမွန်းလာခြင်းကို ကျနော်မကန့်ကွက်သည့်အပြင် လာခြင်းကို အမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ်။ ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာ့အရေး ဖြေရှင်းလို့မပြီးမချင်း မြန်မာပြည်က မပြန်ဖူးဆိုလျင် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သို့သော် ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ သူ့ခရီးစဉ်က သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုတစုံတရာကို မမြင်လို့ မလာနိုင်ဘူးဆိုလျင် နားလည်နိုင်ကြောင်း၊ နားလည်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအမြင်မျိုးနဲ့ အလွယ်ချဉ်းကပ်ပြီး လက်တွေ့မကျ အတတ(Naive)အကြံပေးမှု ပုံစံတစ်ခုကို အင်အယ်လ်ဒီနဲ့ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုကိစ္စကို ပူးတွဲစဉ်းစားတဲ့ ခုနေခါမှာ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဟိုဟာဖြစ်ရင် ဟိုလိုလုပ်လိုက်ပါလား။ ဒီဟာဖြစ်ရင် ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလားဆိုတဲ့ အလွယ်စဉ်းစားတတ်မှု(Simplistic thinking)နဲ့ အကြံပြုတတ်သူတွေဟာ ပြောတဲ့အတိုင်း ဘယ်တော့မှမလုပ်တတ်တဲ့၊ တစ်သက်လုံး ကိုယ့်တံတွေး ကိုယ်ပြန်မြို၊ ကိုယ့်နှပ်ချေးဖတ် ကိုယ်ပြန်ကော်စားတတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို လျော့တွက်ကြဟန်တူပါတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီကဘဲ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုကို မတောင်းဆိုကြောင်း၊ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကြေညာချက်လေး တစ်ခုထုတ်လိုက်တာနဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်နေသူများကို နအဖ၏ သဘောသဘာဝကို မေ့လွယ်နေကြတာလား။ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။
အချုပ်အနှောင်ခံထားရပြီး သူမရဲ့ပါတီဝင်တွေ၊ သူမရဲ့ပြည်သူတွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူမရဲ့ ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်နဲ့ မသေမရှင်အထားခံရတဲ့ပါတီက ကျနော်၊ ကျမတို့မှားပါတယ်။ တပ်မတော် မှန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ စစ်အာဏာရူးတွေက စိတ်ကောင်းဝင်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ လျောလျောရှူရှူ လျှောက်လှမ်းသွားလိမ့်မယ်ထင်ပြီး ပြသနာကို အလွယ်ကြည့်တာမျိုး (Simplistic way)ဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကမ္ဘာကို လှည့်စားဖို့ (Media Manipulation)အတွက် စားနေကြ ကြောင်ဖါးကြီး စစ်အာဏာရှင်တွေ ချထားတဲ့ငါးစာကိုသာ မြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်အယ်လ်ဒီက ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုယ်ကြိုးကွင်းတပ်ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရှေ့မှောက် ဒူးထောက်လိုက်ရုံနဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်၊ ဒီမိုကရေစီရရေးအတွက် လမ်းပွင့်သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအတွက် အင်အယ်လ်ဒီက အချိန်မရွေး မတွန့်မရွံ့အစတေးခံနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်သာ တစ်ကယ်အကျိုးရှိသွားပါစေ။ ယနေ့တိုင် အထုခံ၊ အချုပ်ခံ၊ အသေခံပြီးပြန်တိုက်နေတာ လူထုအတွက်ပါ။ တစ်ကိုယ်ရေ ကောင်းစားဖို့ဆိုရင် မောင့်သဘောလို့ တစ်ခွန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ နအဖနဲ့ နှစ်ပါးသွားပြီး အင်အယ်လ်ဒီပါတီက အချိန်မရွေး အကောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါတီအဓိက၊ ငါအဓိကလို့ ဘယ်သောအခါမှ မပြောခဲ့၊ မကျင့်ခဲ့ပါဘူး။ လူထုသာ အမြဲတမ်း အဓိကဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သင်ကြားချက်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်မိကြပါသေးလား။ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်က နယ်ချဲ့လက်ဝေခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် ပြည်သူလူထုကို ဒီမိုကရေစီပေးဖို့ နှောင့်နေးနေရတာပါဆိုပြီး လူသိရှင်ကြားမိန့်ခွန်းချွေခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျမကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအနေနဲ့ လူထုကို ဒီမိုကရေစီပေးဖို့ခက်နေပါတယ်ဆိုရင် ကျမမြန်မာပြည်က ထွက်ပေးပါ့မယ်။ ကျမထွက်သွားပြီးရင် လူထုကို ဒီမိုကရေစီ ချက်ချင်းပေးမယ်လို့ ဂတိပြုပါဆိုပြီး တောင်းဆို (Challenge)တော့ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ပိတ်သွားတယ်လေ။
ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအ၀င် ပြသနာတွေအားလုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ မလုံလောက်ပါဘူးလို့ ဘယ်လိုဆင်ခြင်တုံတရားကို အခြေခံပြီး ဆိုနိုင်ပါသလဲ။ နအဖက ပြသနာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းလိုလျင် ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သူနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ နအဖသာ တစ်ကယ်ရိုးသားတယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ ဆွေးနွေးဖက်ကို ချုပ်နှောင်ပိတ်ဆို့ထားပြီး ဓါးစာခံထား ပြန်ပေးငွေတောင်းသလိုလုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
အချက်လေးချက်ဖြစ်တဲ့ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှု၊ ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၊ အလုံးစုံပျက်သုံးမှု၊ အထီးကျန်ဖြစ်စေမှုတွေကို အင်အယ်လ်ဒီက စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာရမယ်လို့ အချုပ်သားနဲ့ ထောင်မှူး ဆက်ဆံရေးပုံစံနဲ့ တောင်းဆိုထားတယ်။ ဒီကတည်းက ထောင်မှူးက ပြသနာရဲ့ အဖြေကို လိုချင်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ဒူးထောက်အညံ့ခံမှု(Submission)ကိုသာ လိုချင်တာ အထင်အရှားပါ။ အင်အယ်လ်ဒီက ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို ညင်းဆိုပြီး ဆွေးနွေးလိုကြောင်း၊ တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်း ဖြေရှင်းလိုကြောင်း ပြန်ကြားထားတယ်။ လူထုထောက်ခံမှု ရရှိနေတဲ့ပါတီတစ်ရပ်ကို လူထုယုံကြည်မှုကင်းသွားအောင် အပြီးတိုင်ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးသတ်တဲ့သဘောနဲ့ အတင်းဝန်ခံခိုင်းနေတာကို သိသိကြီးနဲ့ အင်အယ်လ်ဒီက ခေါင်းမလျိုနိုင်ပါဘူး။
ကဲ အခု မဟာညာဏ်ကြီးရှင်များ အကြံပြုသလို စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုကို အင်အယ်လ်ဒီက ရုပ်သိမ်းပေးပါလို့ စာထုတ်ပေးတယ်ဆိုပါစို့။ နအဖက ကျုပ်တောင်းထားတာ လေးချက်ဖြစ်တယ်။ နောက်သုံးချက်ကိုပါ စွန့်လွှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပေးပါလို့ ထပ်ဆိုလာရင် အဲဒီသုံးချက်အတွက်ပါ အင်အယ်လ်ဒီက စွန့်လွှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပေးရမယ်လို့ ဆက်လက်အကြံပြုလိုပါသလား။ ဒီလေးချက်ပြီးရင် နောက်ဘယ်နှစ်ချက် ထပ်မလာတော့ဘူးလို့ ဘယ်မဟာ ညာဏ်ကြီးရှင်က အာမခံနိုင်ပါသလဲ။ လူသုံးယောက် ဟင်းသုံးတုံးရှိတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာ လက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ ဟင်းတုန်းနှစ်တုန်းကို ပြိုင်တူကိုင်ပြီး နောက်တစ်တုန်းကို မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေ လိုချင်တိုင်းသာ ဖြေ့ပေးရမယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုဟာ အရင်အတိုင်း မြောက်လောင်းသာဖြစ်နေမှာကို ကျနော်တို့က သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်း ပြသနာတွေကို ကိုယ့်ပြည်သူအချင်းချင်းသာ ဖြေရှင်းရမယ်။ နိုင်ငံခြားကို အားမကိုးနဲ့လို့ သူတို့ဘဲပြောတယ်။ တစ်ခါ သူတို့ကဘဲ ကိုယ့်ဆွေးနွေးဖက်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာရမဲ့အစား ထောင်ချပစ်တယ်။ တစ်ကယ်တော့ နအဖသာ ရိုးသားရင် နအဖနဲ့ အင်အယ်လ်ဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကုလပါဖို့ မလိုပါဘူး။ နအဖက ကလီကမာနဲ့ မဆွေးနွေးလိုလို့သာ ကုလက ကြားဝင်လာရတာပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေး ညီလာခံကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်သူကမှ ကန့်ကွက်လို့မရ ချပြထားတဲ့အတိုင်းသာ ဆွေးနွေးရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရေးဆွဲရေးကို ဆယ့်သုံးနှစ်ကျော်အောင် ဘာလို့ ကြာခဲ့ရသလဲ။ ဘာတွေကို ဘယ်သူတွေက လေးလေးနက်နက် ဆွေးနွေးနေကြလို့လဲ။ ကြာလေကောင်းလေဆိုပြီး အချိန်ဆွဲနေတာ အထင်အရှားပါ။
တိုင်းပြည်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို စေတနာမှန်နဲ့ ဖြေရှင်းလိုရိုးမှန်ရင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူနဲ့ ဆွေးနွေးရမှာပါ။ အခုလို အခုတစ်မျိုး တော်တော်ကြာတစ်မျိုး လုပ်ပြနေတာက ပြသနာတွေကို မဖြေရှင်းလိုလို့ဆိုတာကို ဘာ့ကြောင့်မမြင်နိုင်ကြတာလဲ။ တိုင်းပြည်မှာ ပြသနာကြီးတွေမရှိရင် စစ်အာဏာရှင်လည်း သက်ဆိုးမရှည်နိုင်တာမို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အစဉ်တည်မြဲဖို့က မရှိတဲ့ပြသနာတွေကို ရှိအောင်လုပ်၊ သေးတဲ့ပြသနာကို ကြီးအောင်လုပ်၊ ရှင်းတဲ့ပြသနာကို ရှုပ်အောင်လုပ်နဲ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီးကို အပ်ကြောင်းထပ်အောင် ဖွင့်သလို လုပ်ပြနေလည်း ကြံဖန်မျက်စေ့လည်ရလောက်အောင် ဒုန်းဝေးနေသူများလည်း ရှိသေးသကိုး။
အင်အယ်လ်ဒီကို လူနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ပါတီ၊ ငွေနဲ့မျှားထားတဲ့ပါတီ၊ အာဏာနဲ့ ခြိမ်းချောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီ၊ ဆိတ်ဝှေးစေ့ပါတီ၊ အချောင်သမား အခွင့်အရေးသမားတွေရဲ့ပါတီ၊ လေလည်ပြရင် အမြီးနန့်တတ်တဲ့ပါတီလို့ ထင်သူများရှိပါသလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က အင်အယ်လ်ဒီဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကင်းကွာနေပြီး ချိနဲ့နေပြီလို့ ကိုဇာနည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အခု ဖေဖေါ်ဝါရီ၂၆၊ ၂၀၀၉ဧရာဝတီမှာ ဒီအတိုင်းဘဲဆက်ရေးပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းက လူထုနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ပါတီတစ်ရပ်ဟာ အခုတိုင်အောင် စစ်အာဏာရှင်တွေက ဘာ့ကြောင့် အကြောက်ဆုံး ဖြစ်နေရသေးတာလဲဆိုတာကို ဖြေနိုင်ပါသလား။ လူထုမထောက်ခံတော့တဲ့ လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလို့မလွှတ်ပေးရဲတာလဲဆိုတာကိုရော ဖြေကြည့်ချင်ပါသလား။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈၊ ၂၀၀၉
မှတ်ချက်။ ။(၁)တင်မောင်ဆိုသော အမည်နှင့်၎င်း၊ တင်ထူးဟူသော အမည်ဖြင့်၎င်း အင်တာနက်တွင် စာဖြန့်နေသူနှင့် ကိုတင်မောင်ထူး(CFOB) လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်း ကိုတင်မောင်ထူးက ကျနော့အား အခိုင်အမာ ပြောကြားသည်။ ကျနော်ယုံကြည်သည်။
။(၂)ကျနော့စာကို မည်သူမဆို ကူးယူဖေါ်ပြနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မလို။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/28/20090အကြံပြုခြင်း
Written by မြန်မာပြည်သား, February 26, 2009
ယူဒီပီပါတီကြီးက မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ လူ့နေမှုဘ၀မြှင့်တင်ရေးကို လုပ်ဘို့ ရည်ရွယ်ထားဆိုပဲ၊ ခင်ဗျားလို သူများငွေလျှောက်လိမ်နေတဲ့လူက မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ လူနေမှုဘ၀ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ၊ ဗဟုသုတရအောင် ပြောပြစမ်းပါ။ ကျွန်တော့ဘက်ကတော့ ခင်ဗျားရန်ကုန်မှာ ဘယ်လောက်လိမ်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ လေးပြောပြချင်တယ်။
တလောကမှ နယူးယောက်ကို ရောက်လာတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်က ကျုံယွမ်ကျော်မြင့်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကလူတွေက ခုချိန်အတိ တသသဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရှာပါတယ်။ ချစ်လွန်းလို့မဟုတ်ပါ. ခင်ဗျားကို တွေ့ ရင် အရေခွံဆွဲဆုတ်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ကျုံယွမ်ကုမ္ပဏီက ငွေလာအပ်သူတွေကို တလ၅% နဲ့ အတိုးပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာလိုက်တော့ သက်ကြီးရွယ်အိုပင်စင်စားများ၊ စီးပွားရေးကို နားမလည်သူ၊ လုပ်ကိုင်မစားတတ်သူမြန်မာများက ရှိသမျှ နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊အိမ်၊ကား ချရောင်းပြီး ငွေတွေ့လာအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ အစပိုင်းမှာ ခင်ဗျားက အတိုးပေးနေပြီး နောက်ပိုင်းတော့ အတိုးမပေးနိုင်တော့ပါ၊ ခင်ဗျားက နောက်ဆုံးမှာ အစုရှယ်ယာ ဈေးများ ထိုးကျသွားကြောင်း ဒေ၀ါလီခံရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ အပူသောကကြီးစွာ ရင်ဆိုင်ကြရရှာပါတယ်။ ၁၀ သိန်းလောက်အပ်ထားသူတွေဟာ အရင်းငွေထဲက တစ်သောင်းနှစ်သောင်းလောက်တောင် မနည်းပြန်ရအောင် စောင့်တောင်းကြရတယ်လို့ဆိုတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခင်ဗျားကို ပြစ်မှုထင်ရှားလွန်းလို့ တရားစွဲရတယ်။ ခင်ဗျားအမှုရင်ဆိုင်နေချိန်မှာ ခင်ဗျားရဲ့ ကုမ္ပဏီက စားပွဲ ကုလားထိုင်များကအစ ချပြီးရောင်းနေရတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက လူထောင်ပေါင်းများစွာကို ဘ၀ပျက်လောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေု မှတ်မိပါသေးရဲ့ လား?
အခုလဲဗန်ကူးဗားကကုမ္ပဏီကို ရန်ကုန်မှာ လုပ်သလိုမျိုး ခင်ဗျားကလုပ်ဘို့ စဉ်းစားထားတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ American Security Exchange Commission က ရန်ကုန်အစိုးရထက် အများကြီးပိုပြီးစံနစ်ကျတဲ့ အပြင် ဒီကလူတွေက မြန်မာပြည်ကလူတွေထက် အစုရှယ်ယာအကြောင်းကို ပိုပြီး နားလည်သူတွေဖြစ်နေတာပဲ၊ ဒီ American Security Exchange Commission က ခင်ဗျားတို့ရှယ်ယာရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်ပါတ်မှု၊ အကျိုးအမြတ်ထွက်ပေါ်မှု ရှိမရှိဆိုတာတွေကို ၄လတစ်ခါ တရားဝင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခိုင်းတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာဟာ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူတွေ၊ ရှယ်ယာဝယ်လိုသူတွေ၊ ပွဲစားတွေ လေ့လာနိုင်အောင်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ
ကုမ္ပဏိရဲ့ ၎လစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးထားတာက ခင်ဗျားတို့ လုပ်ငန်းကို ဘယ်သူမှသုံးမဲ့ လူမရှိ၊ ၀ယ်မဲ့လူမရှိလို ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း ရေးသားထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ခင်ဗျားတို့ရှယ်ယာတွေဟာ နှစ်လအတွင်း အဆ၃၀မက ထိုးတက်သွားးပြီး ဇန်န၀ါရီ ၂၁ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၀ယ်သူလုံးဝမရှိရပ်တန့်သွားတယ်။ မကြာခင်ဒေ၀ါလီခံရတော့မဲ့ ကုမ္ပဏီက ရှယ်ယာတွေကို လူတွေက ဘာသဘောနဲ့ ၀ယ်နေကြတာလဲ၊ စဉ်းစားစရာကြီးပါလား။
ဇန်န၀ါရီ လ(၂၈)ရက်နေ့ မှာ SEC က ခင်ဗျားတို့ ရှယ်ယာ FCCE ကို ခေတ္တရပ်တန့်ထားဘို့ အမိန့် ချမှတ်လိုက်တယ်။ ရှယ်ယာဝယ်ထားတဲ့ လူတွေကတော့ ဆုံးပြီပေါ့၊ ဘယ်သူတွေက၀ယ်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ရှယ်ယာ အရောင်းကိုယ်စားလည်ကြီးများ အသိဆုံးပေါ့ဗျာ။ သေချာတာကတော့ ခင်ဗျား ရဲ့ နာမည်ဟာ ဗန်ကူးဗားမှာ သုံးမရအောင်ပျက်ပြီ၊ ခင်ဗျားရဲ့Moonlighting President Jessica Chiang ကလည်း အခုတော့ မြောင်းထဲကို ရောက်ပြီပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့ ခင်ဗျားကို နိုင်ငံရေးအရ အထောက်အပံ့ပေးသူတွေလည်း ဒုက္ခရောက်ပြီ၊ အဲ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့ မှာ ရှယ်ယာတစ်ခုကို ၉၂ပြားနဲ့ ရှယ်ယာပေါင်း ၁၆၃၅၀၀ ၀ယ်သွားတဲ့လူက ခင်ဗျားကို အခုလောက်ဆိုရင် တရားစွဲနေလောက်ပြီ၊ ခငိဗျားရဲ့ ကုမ္ပဏီိဟာ ၂ပါတ်ခန့် အရပ်ဆိုင်းခံရပြီးနောက် အခုဆက်လက်လည်ပါတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ယ်သူလုံးဝမရှိပါ၊ လုံးဝ (လုံးဝ) တန်ကြေးမရှိတဲ့ အစုရှယ်ယာကို ခင်ဗျားရောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ၊
ဘာတဲ့၊ ခင်ဗျားဗွီအိုအေကို ပြောသွားတာက Vancouver Sun က သတင်းထောက် David Baines ဟာ ခင်ဗျားကို မှားယွင်းရေးမိတဲ့အတွက်ိ တောင်းပန်ကြောင်း စာရေးတော့မယ်၊ ဟုတ်စ၊ ဒီစကားဟာ ဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားမှာ ငွေပဲရှိ့ပြီး ဦးဏှောက်ထဲမှာ ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေကြောင်းကို ပြောတာ၊ ခင်ဗျား မမေ့ဘို့ က ဒီနေ့ မြန်မာလူငယ်တော်တော်များများဟာ အင်တာနက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရေးတတ်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာပဲ၊ ခင်ဗျားကို နာမည်ကြီးသွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့ သူ့ အကြောင်းကို နည်းနည်းလေးမြည်းစမ်းဖတ်ကြည့်ပါအုံး။
David Baines has been uncovering white collar crime, stock fraud in particular, for the past 23 years. He has an MBA from the University of Western Ontario and has won four National Newspaper Awards,aNational Magazine Award and five Jack Webster Awards. His column appears regularly on Wednesdays and Saturdays, and on other days as events occur
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/28/20093အကြံပြုခြင်း
ဘန်ကီမွန်း၊ အင်အယ်လ်ဒီ၊ ဆန်ရှင်နှင့် မြေခွေးမြီးပြ...
အော် ညီလေးမောင်ကျော်မြင့်က မြန်မာပြည်ကိုကယ်တင်ချင်...